तुहिएका धुजाहरु | BLOGSTREET
Posted on April 2, 2010 by Rupesh Shrestha
चंगा मलाई सधै‌ नै प्रीय लाग्छ । चंगा सपना जस्तो लाग्छ र सपना ‌‌‌त्यतिकै मनपर्छ । सायद सपना नहुँदो हो त मान्छेमा सुख नहुँदो हो । त्यहि सपना पूरा हुने आशामा त मान्छेहरु दिनरात गर्छन् । सपनालाई मान्छेहरु भोलिको प्रतिरुप पनि मान्छन् । नमान्नेहरु सपनालाई अप्राप्य अर्धचेतन कल्पना मान्छन् । जस्तो भए पनि सपनामा आनन्द हुन्छ र आनन्द सबैले खोज्छन् । त्यो आनन्द म चंगा हेरेर अनुभूत गर्छु । त्यसैले पनि चंगा र सपनाबारे प्राय लेख्ने गर्छु ।
निकै अघि एउटा मनोवादको स्वरुपमा चंगा र सपनाकोबारेमा लेखेको थिएँ (चंगा सपना)। यो पटक कविताको स्वरुपमा अलि फरक तरिकाले लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
कविता पढ्न भित्र आउनुस्।
सपनाको रंगीन चंगा
चट्ट चुँडिएर उड्दै गयो
वस्तीको आकाश छोडेर
जंगली आकाशतिर ।
आँखाले भ्याउन्जी हेरिरहन्छन्
धागो चुँडिएको चंगा
सपनाको चट्ट परेको चंगा ।
रातमाटो र कमेरो पोतेको चंगा
वादल दर्केर रुझाउन सक्छ
तमसुक मुसारेर सिएको चंगा
जन्तुहरुले चिथोर्ने हुन् कि
धूलो मैलोदेखि जोगाएको चंगा
हिलाम्य पानीमा बिलाइजान के बेर
निगालो भाटामा उनेको चंगा
बाँसघारी र जंगलमा हराउन सक्छ ।
ज‌ंगलतिर कुददै कुददै
सपनाको रंगीन चंगा खोज्न हिंड्छन्
नाङ्गै भुतुङ्गै ।
साँझसम्म कुरीबसेको गाउँ
चरनका वस्तु एक्लाएक्लै फिरेपछि
अँगेना उँघेर निदाएपछि
कोहोलो गर्न लाग्यो ।
चंगा खोज्न हिँडेकाहरु
सुटुक्क दैलो पसे
तुहिएका धुजाहरु लिएर ।
This entry was posted in AsaPoet, In Nepali and tagged चंगा, सपना, dream, kite, Poem. Bookmark the permalink.
2 responses to “तुहिएका धुजाहरु”
मेरो पनि त्यस्तै चङ्गा!!!
जोतारे धाइबा (Jotare Dhaiba) says:
साँझसम्म कुरिबसेको गाउँ
कोहोलो गर्न लाग्यो ।”
हुन त तपाईँको कविताको बाटो यो थिएन, र पनि यो टुक्राले विशेष छोयो ।
आफ्नो शैलीभित्रै पनि निरन्तर परिष्कार गर्दै, रुपाकाट फेर्दै जानुपर्छ लेखकले, तर आफ्नो चिनारी नै भाँच्नुहुन्न । चिनारी भत्काए पनि परिचयको धरोहर कुन भित्तामा राख्‍ने ? बाटो समाइराख्‍नुस् ।